खुकुलो बनाइयो उपत्यकाको निषेधाज्ञा : के खुल्ने, के नखुल्ने ? - Pathibhara Channel
Thursday 22nd , April 2021
खुकुलो बनाइयो उपत्यकाको निषेधाज्ञा : के खुल्ने, के नखुल्ने ?
Pathibhara Channel बुधबार, भदौ १७, २०७७ | September 2nd, 2020 फिचर मोडेल, ब्रेकिंग न्युज, मुख्य समाचार, समाचार
१७ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एक हप्ता निषेधाज्ञा थप गरिएको छ, तर अघिल्ला हप्ताहरुमा भन्दा केही खुकुलो बनाइएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भदौ २४ गते राति १२ बजेसम्म लागू हुने गरी बुधबार साँझ एकै व्यहोराको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन् ।
निषेधाज्ञा पहिलेको भन्दा खुकुलो बनाइएको छ । अब निषेधाज्ञामा विहान ११ बजेसम्म खाद्यवस्तु, दूध र दूधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा/मासु, बिक्री गर्ने पसल खोल्न पाइनेछ । औषधी र पानीको पसल भने दिनभर खोल्न पाइनेछ ।
त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो २ देखि राति ९ बजेसम्म खुल्ने भएको छ । छोटो दूरीको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन पनि दिउँसो २ देखि ९ बजेसम्म चल्न पाउनेछन् ।
निषेधाज्ञाको समयमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको टेक अवे र उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी सेवा भने खुला गरिएको छ । होम डेलिभरी सेवाको मापदण्ड भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छिट्टै जारी गर्नेछन् । होम डेलिभरी र टेक अवे सेवा दिने व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्नेछ र उनीहरुले भेटेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
निषेधाज्ञामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणको काम पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ । तर यस्ता आयोजनाले कामदार र कर्मचारीलाई आयोजनास्थलमै क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्नेछ ।
अब अत्यावश्यक कामका लागि काठमाडौं उपत्यका प्रवेशका लागि पीसीआर रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी
हवाई उडानबाट विदेश जानेहरुले पासपोर्ट, भिसा, स्वीकृत हवाई टिकट हुनेहरु सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनलाई पनि चल्न दिनेछ । तर पीसीआर परीक्षण सुविधा नभएको ठाउँबाट आउनेहरुले भने काठमाडौंमा सुरक्षित रुपमा बस्ने स्थानको सुनिश्चितता र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भदौ ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एक हप्ताको लागि निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । त्यसपछि भदौ १० देखि १७ सम्म थप गरिएको थियो । तेस्रो पटक फेरि एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् काठमाडौं जिल्लाको निषेधाज्ञाको आदेश
१७ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा एक हप्ता निषेधाज्ञा थप गरिएको छ,...
टिकटकमा आफ्नो प्रतिभा देखाउदै नतिजा सुब्बा
हजुर बुवाको रेडियो मोह
गायक राजेश पायल राई र गायिका सुनिता थेगिम म्युजिक भिडियो सुटिङको क्रममा
लभ स्टेसनको पोस्टर सार्वजनिक
सम्भावना बोकेकि नायीका कला राइ , आरुषि बाट स्थापित हुनेमा ढुक्क
२४ घण्टामा थपिए १०९६ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ९६ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।...
कर्णालीको सन्देशः ओलीदेखि राईसम्म कोही पनि सुरक्षित छैनन्
काठमाडौं। एमालेको एकल बहुमत रहेको कर्णाली प्रदेशमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको...
ओली पक्षकै १ र नेपाल पक्षका ३ सांसदको मत पाउँदा माओवादी मुख्यमन्त्री शाहीको पद सुरक्षित
सिपाडोलको गाई फर्ममा युवकको हत्या, हत्या गरेर भाग्दै गरेका व्यक्ति पक्राउ
भोलि नयाँ वर्षका दिन प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने
बढ्यो खतरा : एकै दिन ५५९ कोरोना संक्रमित थपिए, १३ जनाको मृत्यु
भारतमा एकैदिन झण्डै तीन लाख नयाँ संक्रमित थपिए, दुई हजारभन्दा बढीको मृत्यु
मोवाइल चार्ज गर्ने क्रममा एक जनाको मृत्यु, १५ घाइते
जुटे पाँचथरे कलाकारहरु 'पान्थर-काठमाडौ कलाकार मञ्च' गठन